PACHYPHYTUM: SHARAXAADDA DHIRTA, DARYEELKA GURIGA IYO SAWIRRADA - SOOSAARKA DALAGGA
"Moonstone" on daaqadahaaga - pachyphytum
Pachyphytum - Warshad suugaan ah oo caleen ah. Ku tiirsan qoyska qoysaska. Magaca pachyphitum waxaa abuuray laba erey oo Giriig ah: "xabeeb" waa mid qaro weyn, "phytum" ​​waa caleen.
Waxaa sidoo kale loo turjumayaa sida "qaro weyn". Waa Abaarta u adkaysata, ka dhalatay, dhirta dheer, noolaha ubaxa.
Wadanka pachyphytum waa Mexico, meelaha ay ku nool yihiin cimilada. Waxa kale oo laga helaa Koonfurta Ameerika. Waxaan ku leenahay Peter First waa muuqaalka muuqaal ah ee suurtagal ah ee Russia.
Pachyphytum waa dhir aan caadi ahayn.. Waxa laga yaabaa inay ka kooban tahay rosette caleemo, waxayna u egtahay midab ah canab.
Muuqaal ah caleemaha succulent. Wixii midabkooda iyo qaabka aan caadiga ahayn, noocyada qaar ee pachyphytum waxaa lagu magacaabaa "moonstone" ama "almonds candied". Waxay yihiin dhumuc, fareeshka, daboolay nacas cad, oo la mid ah sonkorta baruurta.
Leaves oo ku yaal meel aad u dhow. Iyada oo ku xiran noocyadu waxay noqon kartaa shirkad obowoid ​​ah ama dhammaatay. Midabka caleemaha waa caddaan-buluug ama cawl-cagaar. Sababtoo ah ubaxyada cad, waxay midabkoodu u eg yahay lacagta.
Guntinta afkoda waxaa jira hoy ama jiifo illaa 30 cm oo dheer Caleemaha waxay ku yaalaan inta badan meelaha dariiqyada. Iyada oo koror ah ee da'da geedka, caleemaha ayaa dhici karta, iyo recreations yar yar ku sii jeedo on afkoda.
Waqtiga ubaxa dhirta geedka dheer oo ubax ahcaddaan, casaan, guduud ah, ubax caleenta caleemaha cagaaran ah ayaa ubaxday.
Qeybaha ubaxa, sida caleemaha, waa qaro, casiir leh, oo leh dho cad.
Blooto Pachyphytum laga bilaabo fasaxa xagaaga illaa xilliga dayrta. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha, dhirta ayaa sii wadi doonta. At guriga, pachyphytum ma dhigay abuur ah.
Waqtiga hadda la og yahay 10 nooc oo pachyphytum ah. Laakiin dhammaantood maaha mid ku habboon beerista guriga.
Taas awgeed, noocyada soo socda ayaa ku haboon:
Badanaa, ubaxleyaasha waxaa lagu koray bay'ada gudaha ee noocan ah nooca pachyphytum.
Neefsashada cagaarshowga wuxuu leeyahay dhumuc dherer 20-30 dherer ah, oo ah asliga ah waa dherer ama caleemo qafiif ah oo cufan leh oo leh dhererka saddex iyo dhererka qiyaastii 5 cm, dhumucda lugaha waxay ku dhowaad 1 cm.
Gawaarida Cagaarshow qaab-beedka tooska ah ee da'da yar. Waqti ka dib, waxay koraa ilaa 30 cm oo dheer iyo dushooda dusha sare. Leaves daboolayaa oo keliya qaybta sare.
Ubaxa wuxuu bilaabmaa July. Laga soo bilaabo dhexe ee stem korodhay peduncle dheer, taas oo kaas oo ah shanlo-cad oo cad oo si tartiib tartiib ah u muuqdaan leh xagasha casaan.
Peduncle iyada oo ubaxa ku yaala waxay u egtahay baaluq, kaas oo billaabaya inuu hoos udhaco hoos ilaa inta ubaxyada oo dhan furan yihiin. Ubaxku wuxuu soconayaa ilaa Sebtembar.
Ha qora pahifituma dhererka dhumucdiisuna waxay gaadhsiisaa ilaa 30 cm, silvery, oo leh qalab casaan ah, caleemo qafiif ah oo qafiif ah.
Baaxadda caleemaha waa 5 cm, dhererkuna wuxuu ku dhow yahay 10. Sida dhirta ay u koraan, caleemuhu waxay bilaabaan inay dhacaan oo ay daboolaan qaybta sare ee asliga ah.
Laga bilaabo Agoosto ilaa Nofembar, gambaleelka midabka casaan ee ubaxu ku duugmo peduncle oo koray ilaa 40 cm.
Qalabka dabiiciga ah ee iswada kama badna 10 cm Caleemaha khafiifka ah ee qiyaastii 4 cm dheer waxay leeyihiin bartilmaameed leh. Midabkoodu waa mid aan caadi aheyn - mugdi madow oo mugdi ah oo cagaar ah ayaa si dhib yar loo ogaan karaa. Waxay u egtahay marble. Caleemaha waxay ku yaallaan dhererka dhererka dhererka, waxayna sameeyaan rosette.
Xilliga xagaaga, ku dhowaad 40 centimeter peduncle, ubax-casaan-cas cas iyo ubaxyo buluug ah. Waxay ku hareereysan yihiin buluugyada buluugga ah.
Daryeelka fuuqbaxa guriga, aad u fudud. Xitaa a florist bilawga ah ayaa qaban kara.
Dhirta waa mid aad u adag.
Waxay noqon kartaa qorraxda kulul, qol qol oo qabow ah, samee iyada oo aan la waraabin wakhti dheer ah, buufinta for pachyphytum waa aan la aqbali karin, sababtoo ah waxay jecel yihiin boqolkiiba qoyan ee qoyaan.
Soo saaristasida ku-beddelashada pachyphytum waa in lagu qabtaa guga, marka uu dhirta weli ku jiro xaalad nasasho qaraabo ah. Cabbirka dheriga waa in lagu go'aamiyo qiyaasta dhirta.
Succulent si tartiib ah ayuu u koraadhowr centimitir sannadkii. Hase yeeshee da'da wey sii korodhaa. Sidaa daraadeed, waxaa lagula talinayaa in laguu soo celiyo weel kasta oo gaaban oo gaas ah.
Qeybta hoose ee dheriga waa in lagu shubo dheecaan. Carrabku waa inuu ka kooban yahay isku dar ah caleen, carrada cagaaran iyo ciid adag.
Sand waxaa lagu bedeli karaa boodh loo yaqaan "brick". Peat waa ka fiican tahay in la sameeyo, sababtoo ah waxay ku dari doonaa dabacsan ee ciidda, iyo si ay dhirta si ay u koraan more si joogto ah, waa lagama maarmaan in ciidda noqon cufan yahay.
Earth waa in ay ahaataa dhexdhexaad ahaan asiidh ama wax yar oo nafaqada ah iyo nafaqo yar.
Hoos udhigida pachyphytum waa in lagu sameeyaa si taxadar leh intii suurtagal ah, adoo aan taaban caleemaha gacmaha.
Haddii aad ka tirtirto dusha sare, xaashidu way dhiman kartaa.
Dharka ugu sareeya succulents waa in la fuliyaa xilliga nolosha firfircoon ee warshadda - laga bilaabo guga ilaa dayrta.
Si aad u sameyso dhowr jeer this time inta lagu jiro wakhtigan, waxaad u baahan tahay inaad xaliso of Bacriminta-ka kooban Bacriminta ka yar xididka. Qadarka nitrogen ee ku jira waa inay ahaataa mid aad u yar.
Pachyphytum waa warshad suubban, taas oo micnaheedu yahay in qadar go'an oo biyo ah ay ku urursan yihiin unugyada caleenta.
Wuxuu caadaystaa cimilada cawska, sidaas awgeed waa lagama maarmaan in la biyoodo wax yar oo aan nadiif ahayn: marka dhulka dushiisa la qalajiyey. Guga iyo xagaaga waxay ku filnaan doontaa in lagu buufiyo ciidda laba toddobaad kasta biyo. Iyadoo xagaaga aad u kulul, waxaad samayn kartaa toddobaadle.
Xilliga jiilaalka, waa ku filan inaad waraabiso geedka marmar bishii. Laakiin haddii heerkulka qolka uusan gaarin 10 digrii, markaa waxa fiican inaad diidid waraabinta. Tani waxay la mid tahay dhimashada geedka.
Biyaha mid waa in uu sidoo kale aad u taxaddar in aan ku dhicin caleemaha iyo stem of pachyphytum. Laga soo bilaabo qoyaan xad dhaafka ah ayaa bilaabi doona burbur geedka. Marnaba may suulin karin.
Bloomkii pachyphytum wuxuu bilaabmaa xagaaga. Laga soo bilaabo dhexe ee asliga ah koraa gaaban ama dheer, peduncle toosan ama leexsan qaab dhismeedka. On, ku hareereysan sepals lacag ah ama iftiin cagaaran, ubax jaalaha ah-muuqaalka dambe u muuqdaan - ka yar ama weyn ee size iyo ka duwan midabka.
Ubaxyada maqaarka ilaa dhammaadka dayrta, illaa iyo inta uu jiro waqti nabad ah. Urka ubaxa pachyphytum ayaa ku dhawaad ​​aan la dareemin.
Muraayad ciriiri ah waa inuu iftiimaa. Waxay si sahlan u bedelaysaa qoraxda tooska ah. Shoogga dhirta waxaa loo oggol yahay xaaladaha qaarkood.
Haddii ay dhacdo iftiin aan ku filnayn, caleemaha geedka waxay bilaabaan inay lumiyaan midabkooda, noqdaan kuwo caajis ah, iyo ubaxu ma dhici karto.
Qoyaanka hawada sababtoo ah pachyphytum waa inay ahaato mid hooseeya.
Goobaha qoyan, qashinka, dhirta iyo xididka geedka waxay bilaabaan inay qudhuntaan.
Warshadu way dhimataa. Laakiin qol aad u qalalan heerkulka sare, dhirta u baahan tahay hawo cusub si ay u sameeyaan ubax.
Guga iyo xagaaga, dheriga pachyphytum waa in laga saaro balakoonka, loggia ama shakhsi ahaaneed. Haddii aysan suurtagal ahayn, waxaa lagama maarmaan ah in hawo lagu nadiifiyo qolka succulent.
Inta badan raaxo leh Heerkulka suuxdinta - 20-25 digrii. Succulents, oo u caado ah kulaylka cawska, si fudud u dulqaadan doonaa xagaaga kulul.
Xilliga jiilaalka, marka dhirta ay tahay nasasho, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo microclimate qaboojiye.
Heerkulka 15 digriga ayaa ugu habboon isaga. Ka hooseeya 10 digrii oo ah pachyphytum ayaa jabin kara. Caleemaha ayaa hoos u dhici doona, waxaa jira feejignaan sareeya in dhirta ay dhimato.
"Moonstone" - pachyphytum:
Waayo Neefsashada Pachyphiteum isticmaal gooynta caleemaha ama gooyn caleen. Kala saarida jirida warshadda ugu weyn, waxaa la qalajiyaa dhawr maalmood, ilaa gooyuhu sii dheeraado.
Ka dibna jaridda waxaa si fudud loo geeyaa dhulka, iyada oo la siinayo nooc ka mid ah taageero. Waxaad biyo ku dari kartaa dhowr maalmood.
Pachyphytum waxay qaadataa xidid adag, laakiin haddii aadan ku shubin ciidda oo aan u abuurin qoyaan sare ah geedka, ka dibna muddo yar ka dib goynta ayaa qaadan doona xididka. Wixii rooting ka guuleysta, bacarin leh phytoharmones waa suurtagal.
Pachyphytum adkaysi u cudurada fungalsaameynaya dhirta kale ee gudaha, laakiin waxaa waxyeelleyn kara cayayaanka sida mealybugada.
Dadka waaweyn iyo dirxiga ee cayayaankan waa cayayaanka nuugista. Waxay nuugaan casiir ka caleemaha, burooyinkeeda iyo jirridda succulent. Marka ay u muuqato warshadda, waxaa lagu daboolaa shabeel ee caarada midab cad.
Leaves bilaabaan si ay u qalalaan, burooyinkuna way dhacaan. Intaa waxaa dheer, dhirbaaxada dhaadheer ee cayayaanka ayaa ah deegaan wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta fangaska madow.
Haddii ay jiraan calaamado muuqaal ah goryaan waxaa lagama maarmaan ah in la qoyo suufka suufka saabuunta iyo tirtiro caleemaha dhirta waxyeellada leh, ka saarida dirxiga iyo cayayaanka qaangaarka ah. Markaas waxaa lagama maarmaan ah in la buufiyo pachiphytum.
Tani waa in la sameeyaa 3 jeer iyadoo la raacayo mudo ah hal toddobaad. Waxaad isticmaali kartaa faleebo ee toonta, tubaakada tubaakada, fuska dhirta kale ee xooggan. Geedi socodka wanaagsan ee dhirta leh khamriga ama tincture ee calendula, kaas oo laga iibsado farmashiyaha.
Iyadoo guuldaradii xoogganaa ee suurtagal ah cayayaanka Waa lagama maarmaan in la isticmaalo mukhaadaraadka - xirmid la'aan. Kuwaas waxaa ka mid ah "Admiral", "Aktellik", "Fitoverm", "Vertimek", iwm. Ha ilaawin in daawooyinka giraanta lagu isticmaalo ay aad u sun yihiin. Isticmaalkooda macquul maaha gudaha.
Pachyphytum waa mid aad u caan ah growers of succulents iyo bannaanka u fudud.
Ciyaaryahan kasta oo caksi ah ayaa si sahlan u kobcin kara warshadani guriga - wuxuu leeyahay nidaam daryeel hooseeya.
Qalalfaha qibrada leh waxay abuuraan jardiinooyin yaryar oo ka mid ah suulaliyeyaasha xaaladaha qolka. Sababtoo ah muuqaal aan caadi aheyn, pachyphytum waxay ku fadhisaa meel qiimo leh.
Waa warshad caddayn - oo muddo dheer noolaa ayaa soo jiidata qof kasta oo dareenkiisa. Hel pachyphytum iyo kori "moonstone" on windowsill ah.